Home TOROHEVITRA FOTOTRA EUROPEAN Mpilalao baolina kitra frantsay Antoine Griezmann Tantara Momba ny Tantaram-pahamendrehana Ankapobe Zava-dehibe
Ny LB dia manolotra ny tantara manontolo momba ny lalao baolina kitra malaza amin'ny anarana; 'Le Petit Diable'. Ny tantaram-pitiavan'i Antoine Griezmann momba ny tantaram-pitiavan'antoko sy ny tantaram-piainana tsy fantatra dia mitondra ny fitantarana feno momba ny zava-mitranga mahatalanjona hatramin'ny fahazazany hatramin'izao. Ny analysis dia misy ny tantaram-piainany talohan'ny laza, ny fiainam-pianakaviana ary ny tranga tsy fantatra momba azy.
Eny, fantatry ny rehetra ny momba ny fahaizany manao fahaiza-manao fa ny mpankafy vitsy ihany no mahita ny tantaram-piainan'i Antoine Griezmann izay mifandray bebe kokoa amin'ny ray aman-dreniny, ny rahalahiny, ny anabaviny, ary ny fiainany sns. Tena mahaliana ny fiainany ivelan'ny toerana. Amin'izao fotoana izao tsy misy adieu intsony, aleo manomboka.
Antoine Griezmann Childhood Story Plus Untold:Voalohandohan'ny fiainana
Antoine Griezmann dia teraka tamin'ny 21st of March 1991 ao Mâcon, Frantsa avy amin'i Alain Griezmann (ray) sy Isabelle Griezmann (reny).
Izy dia teraka tamin'ny dadan'ny manankarena izay mpanao politika any Frantsa. Ny rainy dia mpanolotsaina an-tanàn-dehibe teo aloha izay nanan-karena mba hanomezany an'i Antoine zanany ny zavatra rehetra nilain'izy ireo. Ny tovovavy anefa, dia mpitsabo hopitaly.
Ny fahatongavan'izy ireo baolina kitra dia avy amin'ny fiaviany Portiogey. Tena ilaina ny manamarika fa ny ra portogey dia mihodina amin'ny lalan-dran'i Antoine Griezmann. Ny raiben'i Antoine Amaro Lopes dia mpanohana ny foiben'ny foibe izay naneho ny ekipa Portiogey taloha.
Antoine Griezmann Childhood Story Plus Untold:Atombohy amin'ny baolina kitra
Ny nahazoany raibe iray izay mpilalao baolina dia nahatonga azy ho liana amin'ny lalao. Na izany aza, ny tombontsoa farany nataon'i Antoine dia rehefa nijery ny fitiavan'i Zinedine Zidane sy izy Thierry Henry nandritra ny World Cup 1998. Izany dia nanentana azy tamin'ny vanim-potoana maimaim-poana mba hiditra lalao baolina kitra ary taorian'izay, ny nofiny dia hamerina rehefa Zidane sy Henry dia nanao tamin'ny lobaka frantsay.
Griezmann, izay mpanohana an'i Lyon tamin'ny naha ankizy azy, dia nanana fahafahana foana. Teraka 70 kilometatra miala an'i Lyon ao Mâcon, dia midika ho fahafahana ho an'ny asany tanora. Indray mandeha izy dia nandalo fitsapana tao amin'ny klioban'ny tanora Lyon fony mbola tanora, saingy heverina ho saro-pady ny hiditra ao amin'ny akademia ary nolavina.
Griezmann dia niverina tany amin'ny tranon-dry zareo ary nanomboka niasa tao amin'ny klioba UF Mâcon. Nanaiky tany izy noho ny fitarihan'ny dadany. Raha tao izy dia nirotsaka indray tamin'ny fisedrana maromaro niaraka tamin'ireo klioba matihanina hafa mba hahazoana toerana iray amin'ny iray amin'ireo academies tanora.
Nolavina indray izy satria nanontany ny habeny sy ny lanjany maivana ny klioba. Antoine Griezmann tamin'izany fotoana dia tena kely-nalaina ho an'ny taonany. Ianao dia nanana ny tsara indrindra amin'ny akanjo sy ny fomba fijery azy ho mpilalao baolina ankizy. Izany dia satria zanaka manan-karena izy.
Farany dia nisy fandrosoana tonga teo amin'ilay zazalahy kely. Tao amin'ny 2005, nandritra ny fotoam-pitsarana tamin'i Montpellier, Griezmann dia nilalao tamina fifaninanana nahafinaritra nanohitra ny Akademian'ny Tanoran'i Paris Saint-Germain any Parisy, ary nahavariana ny scouts klioba. Ny scout an'ny klioba espaniola ho an'i Real Sociedad, izay nanatrika ny hetsika. Nahaliana azy bebe kokoa izy ireo fa tsy toy ny Scouts. Taorian'ilay fifaninanana izay nahazoany trophy, nanolotra ny fitsarana Griezmann ho herintaona ny fitsarana tany amin'ny fitsarana fitsarana San Sebastián, izay nanaiky azy.
Noho ny fahombiazany miverimberina, dia nanolotra herinandro tao amin'ny club i Antoine. Rehefa miteny izy ireo fa ho tonga kintana, dia nifandray tamin'ny ray aman-dreniny ny klioba ary nanolotra azy ny fifanarahana amin'ny tanora. Ny ray aman-drenin'i Griezmann tamin'ny voalohany dia tsy sahy nanindrahindra ny zanany lahy tany Espaina. Taorian'ny fiangaviana be dia be dia navelan'izy ireo hanao izany. Izany dia taorian'ny fanomezan-toky tsara.
Rehefa tonga tao amin'ny Real Sociedad izy, dia nitoetra tao an-tranon'ilay scout frog de France izay nanaisotra azy tany Frantsa i Griezmann. Nanana vola ampy hiarovana ny tranony izy, saingy mbola kely loatra ny hipetraka irery. Nankany am-pianarana tany amin'ny sisin-tanin'i Bayonne mihitsy aza izy. Izy dia mampiofana bebe kokoa amin'ny takariva amin'ny foiben'ny klioba. Tsy dia nila fotoana ela talohan'ny nahitan'i Antoine ny fivoarany avy amin'ny zazalahy kely iray natsangana ho an'ny zatovo iray natsangana.
Na izany aza, nila fotoana izy handrafetana ny ekipa Real Sociedad voalohany. Izany dia tonga taorian'ny efa-taona tao amin'ny ny tanora.
Antoine Griezmann Childhood Story Plus Untold:The Breakthrough
Tamin'ny fahavaratr'i 2014, notoahin'i Griezmann ho an'i Atletico Madrid. Eo amin'ny 28th of July 2014, Atlético Madrid dia nifanaraka tamin'ny Real Sociedad noho ny famindrana an'i Griezmann, noho ny saram-pinoana ninoany fa akaiky azy €30 tapitrisa (£24 tapitrisa) clause buy-out.
Nandany ny fotoam-pitsaboana izy tamin'io andro io ary nanao sonia fifanarahana enina taona tamin'ny 29 Jolay, 2014. Izy no ilay La Liga Player of the Month ho an'ny 2015 tamin'ny Janoary na dia teo aza ny fisehoana tamin'ny telo tamin'ireo lalao dimy tao Atlético. Io 2015 io ihany, nofidina ho toy ny mpilalao ATM izy ary iray amin'ny telo nandresy tamin'ny ekipan'ny taona tamin'ny loka LFP niaraka tamin'i C. Ronaldo sy i Lionel Messi. Hatramin'izay fotoana izay, ny fitsanganany ho ambony dia tsy fahita firy. Ny ambiny araka ny filazany dia tantara.
Antoine Griezmann Childhood Story Plus Untold:Fiainana ao amin'ny fianakaviana
RAY: Ny rainy Alain, izay mpitan-tsoratry ny tanàna, dia avy amin'i Alsatiana. Izany no nahatonga ny anaram-bosony alemana.
Ny ray aman-drenin'i Antoine Griezmann- Alain sy Isabelle
rENY: Ny reniny Isabelle (sary etsy ambony) dia toeram-pitsaboana taloha. Mpandihy portogey izy, araka ny voalaza terỳ aloha. Ny rainy Amaro Lopes dia mpilalao baolina kitra Portiogey ho an'ny FC Paços de Ferreira.
I Amaro Lopes dia tonga tany Frantsa niaraka tamin'ny vadiny Carolina mba hiasa amin'ny fananganana ao 1957. Tany Frantsa, teraka ny renin'i Antione. Maty ny dadany rehefa zazakely ny zafikeliny. Matetika i Griezmann no nandany ny fialan-tsasatra tao Paços de Ferreira. Tsy nisy nilalao baolina kitra izany. ho asa.
anabaviny; Ny anabavin'i Antione Griezmann dia Maude. Izy dia nieren-doza tamin'ilay fahirano tao amin'ny kianjan'i Bataclan tamin'ny fanafihana nataon'ny Paris 2015 tamin'ny Novambra, izay nitrangan'izany raha nilalao tamin'i Alemaina tao amin'ny Stade de France. Amin'izao fotoana izao dia izy no mpitantana ny zon'ny sariny.
Ny Rahavavy Antoine Griezmann-Maude
rahalahiny avy; Antione dia manana rahalahy tanora antsoina hoe Theo. Theo koa dia mpilalao baolina matihanina amin'ny baolina kitra portioge an'ny Sporting Macon (Toy ny tamin'ny fotoana nanoratana).
Young Antoine Griezmann sy ny zandriny-Theo
Nihalehibe i Theo. Porofo izany fa efa nanan-janaka i Antione. Izany no antony nandavany azy indray androany.
Antoine Griezmann sy ny rahalahy
Antoine Griezmann Childhood Story Plus Untold:Relationship Life
Ny volana Jona, 2017, Antoine dia nanambady an'i Erika Choperena, ilay sakaizanao efa ela. Nanana ny antsoin'ny olona hoe 'Secret Wedding' izy ireo. Ny sakaizany sy ny fianakaviany ihany no nasaina. Ilay mpikomy sy ny vadiny vaovao dia nahasarika ny fampahalalam-baovao tsy nampoizina rehefa namoaka ny fampakaram-bady izy ireo.
Nosoratany ny sary Instagram mahafaly: "Ny lahatsoratry ny felicidad", izay midika hoe adika 'Lalana feno fahasambarana'.
Eo amin'ny lafiny iray, nanao fampanantenana mahafinaritra maro izy ireo. Raha telefona finday izy, raha ny marina, i Antoine dia tiany kokoa ho ny fiantohana. Fantatry ny rehetra fa hiafara amin'ny fanambadiana izy ireo. Izany dia nitranga.
Antoine Griezmann Fitiavana ny Tantara miaraka amin'i Erika
I Griezmann sy ny vadiny talohan'ny fanambadiana dia nanan-janaka iray. Vehivavy iray antsoina hoe Mia Griezmann. Raha ny tena izy dia miaina fiainam-piainana manokana i Antoine ary tsy tiany ny mijery ny tarehin'ny zanany vavy amin'ny fampahalalam-baovao.
Antoine Griezmann Zanaka- Mia
Antoine Griezmann indray nahazo £ 520 tsara sy fampitandremana ... ho fankalazana ny fitsingerenan'ny taonan'ny vadiny taorian'ny sasantsasany. Taorian'ny famonoana ny fandresen'i 3-0 teo amin'i Valencia, dia namoaka t-shirt iray izy miaraka amin'ny hafatra an-tsoratra amin'ny vadiny: "Feliz Cumple Gordita", na "Happy Birthday Chubby".
Raha toa ka nahafinaritra an'i Erika tamin'ny fanehoana fankafizana ny fitiavan'i Griezmann, dia tsy nahita an'io fampihomehezana io ny FA Espaina. Nandoaviny haingana ilay vola ary nanohy nankalaza ny fitiavany ny fiainany tamin'ny fombany manokana izy.
Antoine Griezmann sy ny Fitiavany ny Fiainany
Na dia eo aza izany, i Antoine dia manana fifandraisana marina toa an'io Robert Lewandowski, Roberto Firmino ary Juan Mata.
Antoine Griezmann Childhood Story Plus Untold:Hair Style and Tattoo facts
Na izany aza, ny volo eo amin'ny glizz Griezmann dia manome ny fahatsapana fa tena mendri-piderana izy ary manana fomba fiainan'ny antoko.
Ny tatoazy dia manome hevitra hafa. Ny lehilahy frantsay dia manana tattoos maromaro mifandray amin'ny fivavahana.
Facts Antoine Griezmann - Tattoo
Ny sandriny ambony dia manana sarin'i Jesoa raha ny sandriny ambany kosa dia manasongadina raozy misy rahona sy kintana.
Ny raiamandrenin'ny ray aman-dreniny dia manao azy koa. Antoine dia tsy olona manontany ny vatany tsy misy antony. Tena fivavahana marina izy ary porofon'izany ny tatoazy.
Antoine Griezmann Childhood Story Plus Untold:The Big Ban
Antoine Griezmann dia nampiato ny fisoloany ny ekipam-pirenena Frantsay any amin'ny ambaratonga rehetra nandritra ny herintaona mahery.
Ny hetsika dia mifandraika amin'ny zava-nitranga iray izay nahitan'i Griezmann sy ny sasany tamin'ireo mpiara-miasa aminy tao amin'ny clubclub night club, raha tokony ho niaraka tamin'ny ambin'ireo ekipa izy ireo tany amin'ny toeram-piofanana tany avaratry ny firenena.
Ny tantaram-pitiavan'i Hugo Lloris momba ny tantaram-pianakaviana malaza fa tsy fantatra